တရားဝင် Galaxy S8 နှင့် S8 + ၏သတင်းအချက်အလက်အားလုံး | Androidsis
တရားဝင် Galaxy S8 နှင့် S8 + တို့၏သတင်းအချက်အလက်အားလုံးပေါ်လာသည်
လာမည့် Galaxy S8 နှင့် S8 + ကိုမထုတ်လုပ်မီရက်အနည်းငယ်အကြာတွင်စီစဉ်ထားသည် ဒီမတ်လ 29 ရက်, လက်တွေ့ကျကျပေါက်ကြားခဲ့သည် သူတို့ကိုအကြောင်းကိုအားလုံးတရားဝင်သတင်းအချက်အလက်နည်းပညာဆိုင်ရာလက္ခဏာများအပါအ ၀ င် အပိုပစ္စည်းများ နှင့်စာနယ်ဇင်းအသစ်ပုံရိပ်တွေ။
အသစ်ဓာတ်ပုံများအားဖြင့်ပေါက်ကြားခဲ့သည် Roland Quandt အနက်ရောင်၊ အပြာရောင်၊ ငွေရောင်နှင့်မီးခိုးရောင်အပါအ ၀ င်အရောင်မျိုးစုံအတွက်အထင်ကရသစ်များကိုထုတ်ဖော်ပြသခဲ့ပါသည်။ ရှေ့နှင့်နောက်ဘောင်ကိုရှင်းလင်းသောရိုက်ချက်များနှင့်အတူအလွန်အသေးစိတ်မြင်နိုင်သည် လက်ဗွေ sensor, ဘေးထွက်ခလုတ်များ, LED flash နှင့်နောက်ကင်မရာ.
Samsung Galaxy Note7၏ fiasco ကိုလူတိုင်းမေ့ပျောက်နိုင်ရန်အတွက်ဒီဇိုင်းအသစ်နှင့်အတူအသုံးပြုသူများကို "Galaxy range ၏အကောင်းဆုံးအင်္ဂါရပ်များ" ကိုပေးဖို့ရည်ရွယ်ထားသည်။ ထုတ်ကုန်များ၏နှင့်အချို့သောအသစ်သောအသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုနှင့်အတူ။
1 Galaxy S8 နှင့် S8 + ၏နည်းပညာဆိုင်ရာလက္ခဏာများ
1.3 Iris စကင်နာနှင့်လက်ဗွေအာရုံခံကိရိယာ
1.4 IP68 အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်
1.5 ပရိုဆက်ဆာ၊ RAM နှင့်အခြားဟာ့ဒ်ဝဲအစိတ်အပိုင်းများ
2 Guard S8 အစီအစဉ်နှင့်တိုးချဲ့အာမခံ
3 စျေးနှုန်းနှင့် Galaxy S8 နှင့် S8 + ၏အခြားဆက်စပ်ပစ္စည်းများ
5 Galaxy S8 နှင့် S8 + တို့၏ပုံများ
Galaxy S8 နှင့် S8 + ၏နည်းပညာဆိုင်ရာလက္ခဏာများ
အကယ်၍ သင်သည် Galaxy S8 နှင့်ပတ်သက်သည့်နောက်ဆုံးသတင်းများနှင့်မကိုက်ညီပါကထွက်ပေါ်လာသောသတင်းအချက်အလက်ပြန်ရလာသည် ကျွန်ုပ်တို့သိပြီးသားသတ်မှတ်ချက်များကိုအတည်ပြုပါစံ S8 ရှိလိမ့်မယ်အဖြစ် ၅.၈ လက်မကွေးကောက် Super AMOLED မျက်နှာပြင်S8 + သည်ဒီဇိုင်းနှင့်နည်းပညာကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားမည်ဖြစ်သော်လည်းအရွယ်အစားမှာသာဖြစ်သည် 6.2 လက်မ.
Device နှစ်ခုလုံးရဲ့ resolution မှာဆက်လက်ရှိနေမှာပါ 2.940 x 1.440 pixels နှင့် aspect ratio သည် 18.5:9ဖြစ်သည်ဆင်တူတဲ့လမ်းအတွက် LG က G6.
ကင်မရာနှင့် ပတ်သက်၍ စမတ်ဖုန်းနှစ်ခုလုံး 12 megapixel resolution ကိုထိန်းသိမ်းထားလိမ့်မယ် (pixel တစ်ခုချင်းစီသည်အရွယ်အစား ၁.၄ μm ရှိ၍)aaperturef/ ၁.၇၊ Dual-Pixel autofocus, ပုံရိပ်တည်ငြိမ်မှုနှင့် 4K ဗွီဒီယိုမှတ်တမ်းတင်ခြင်း, ဤတစ်ကြိမ်တွင်၎င်းတွင်စနစ်ပါဝင်သည်ဟုထင်ရသော်လည်း လေဆာ autofocus သာ။ ကြီးမြတ်တိကျသည်။
ရှေ့ကင်မရာ ၎င်းသည် resolution ကို 8 megapixels (S7 တွင်5MPx) အထိမြှင့်တင်ပေးရုံတင်မက F / 1.7 ၏ aperture နှင့် "မြင့်မားသောပြောင်းလဲနေသောအခြေအနေများကိုပိုမိုကောင်းမွန်စွာဖမ်းယူရန်" ကူညီပေးမည့် autofocus system လည်းပါရှိသည်။
အခြားတစ်ဖက်တွင်, iris စကင်နာကိုခွင့်ပြုလိမ့်မည်ဟုလည်းရှိပါတယ် terminal ကိုအလွယ်တကူဖွင့်နိုင်သည် အခါလက်ဗွေအာရုံခံကိရိယာ၏အသုံးပြုမှုကိုလက်လှမ်းမမီအတွင်းမဟုတ်ပါဘူး။
Iris Scanner အပြင် Samsung သည်အနာဂတ်ပစ္စည်းများကိုလည်းaရှေ့လက်ဗွေအာရုံခံကိရိယာ ဒါကထောက်ခံမှုရှိပါတယ် လျှောက်လွှာများကိုဖွင့်ပြီးပိတ်ပါ.
နောက်ထပ်ကာကွယ်ရေးအစီအမံ၏ဝန်ဆောင်မှုလိမ့်မယ် Secure Folder or Secure Folderအသုံးပြုသူများသည်အက်ပလီကေးရှင်းများ၊ ဖိုင်များနှင့်အခြားအထိခိုက်မခံသောဒေတာများကိုသိမ်းဆည်းရန်ခွင့်ပြုသည့် Galaxy Note7တွင်လည်းတွေ့ရသည်။
Secure Folder app ကို Galaxy S7 နဲ့ S7 အစွန်းမှာလည်းသင်စိတ် ၀ င်စားရင်ရရှိနိုင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် terminal အသစ်တွေအတွက်သီးသန့် function တစ်ခုတော့မဟုတ်ပါဘူး။
ဒီကိရိယာနှစ်ခုလုံးမှာအသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်ရလိမ့်မယ် IP68 ရေနှင့်ဖုန်မှုန့်ဆန့်ကျင်မှု, Galaxy S7 နှင့်တူညီသောလမ်းအတွက်။ ဤနည်းအားဖြင့်သင်သည်မိနစ် ၃၀ တွင် ၁.၅ မီတာအနက်ရှိသူတို့ကိုရေထဲသို့နှစ်မြှုပ်နိုင်သည်။
သို့တိုင်စမတ်ဖုန်းများသည် ၃.၅ မီလီမီတာနားကြပ်ပေါက်နှင့်စတီရီယိုစပီကာများကိုဆက်လက်ပေးလိမ့်မည်။
ပရိုဆက်ဆာ၊ RAM နှင့်အခြားဟာ့ဒ်ဝဲအစိတ်အပိုင်းများ
Hardware ပိုင်းဆိုင်ရာအရ Galaxy S8 နှင့် S8 + ကaကိုပေါင်းစပ်ထားတယ် Exynos 8895 ပရိုဆက်ဆာ 2.5GHz ၏ကြိမ်နှုန်းနှင့်အတူရှစ် core ကို (အချို့စျေးကွက်များတွင် SoC ရှိလိမ့်မည် Qualcomm Snapdragon 835), 4GB RAM၊ သိုလှောင်မှု 64GB သိုလှောင်မှုနှင့် 64GB အထိ microSD ကဒ်များအတွက် slot တစ်ခု
ဆက်သွယ်မှုအရပစ္စည်းနှစ်ခုလုံးမှာ module တစ်ခုရှိမယ် Dual Band Gigabit Wi-Fi၊ LTE အထောက်အပံ့၊ GPS၊ Bluetooth 4.2, NFC နှင့် USB-C port တစ်ခု။
နောက်ဆုံးတော့ ဘက်ထရီ အဆိုပါဆိပ်ကမ်း၏စွမ်းရည်ရပါလိမ့်မယ် 3000mAh Galaxy S8 တွင်ရှိသည်နှင့် S3500 Plus တွင် 8mAh။ နှစ် ဦး စလုံးသည်မြန်ဆန်စွာအားသွင်းနိုင်သည့်အားသွင်းစက်အသစ်တစ်ခုမှတစ်ဆင့်မြန်ဆန်စွာအားသွင်းနိုင်ပြီးအောက်ပါပုံတွင်သင်မြင်နိုင်သည်။
Galaxy S8 ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ - ကြိုးမဲ့အားသွင်း၊ DeX Station နှင့်ဘက်ထရီ
Guard S8 အစီအစဉ်နှင့်တိုးချဲ့အာမခံ
သုံးစွဲသူများ၏ယုံကြည်မှုပြန်လည်ရရှိရန်အတွက် Samsung သည်သုံးစွဲသူများကိုခွင့်ပြုမည့် Guard S8 ဟုခေါ်သောနည်းပညာပံ့ပိုးမှုအစီအစဉ်အသစ်တစ်ခုကိုကြေငြာရန်ရည်ရွယ်သည် သင့်ရဲ့ဆဲလ်ဖုန်းကို ၂ နာရီအတွင်းပြန်လည်ပြုပြင်ပါ.
ထို့အပြင်ကုမ္ပဏီကိုလည်းကမ်းလှမ်းလိမ့်မည် အချို့သောနိုင်ငံများတွင်တရားဝင်အာမခံ၏တိုးချဲ့မှု ဝေးလံခေါင်သီသောထောက်ခံမှု option နှင့်အတူ၎င်းသည်ချိုးဖောက်ပါကအခမဲ့မျက်နှာပြင်ပြောင်းလဲမှုဖြစ်သည်။
စျေးနှုန်းနှင့် Galaxy S8 နှင့် S8 + ၏အခြားဆက်စပ်ပစ္စည်းများ
တရား ၀ င် Galaxy S8 နှင့် S8 + တို့၏တရားဝင်စျေးနှုန်းများကိုမကြာသေးမီကကြေငြာခဲ့သည်။ စံမော်ဒယ်တစ် ဦး ရှိသည်လိမ့်မယ် ဈေးနှုန်းမှာယူရို ၇၉၉ ဖြစ်ပြီး S799 Plus သည်ယူရို ၈၉၉ ကျသင့်မည်ဖြစ်သည်.
ထိုနည်းတူစွာ Samsung သည်ထိုကဲ့သို့သောကဲ့သို့သောစိတ်ဝင်စားဖွယ်ဆက်စပ်ပစ္စည်းအချို့ကိုလည်းပေးလိမ့်မည် DeX ဘူတာရုံ, သောအသုံးပြုသူများသည် mode ကိုခံစားဖို့ခွင့်ပြုလိမ့်မယ် Windows 10 Continuum နှင့်ဆင်တူသည်.
ဤအချက်များသည်မတ်လ ၂၉ ရက်တွင် Samsung မှကြေငြာမည့်အသေးစိတ်အချက်အလက်များဖြစ်သော်လည်းအံ့အားသင့်စရာများအမြဲရှိနေနိုင်ကြောင်း၊ နှစ်ရက်အတွင်းတရားဝင်ထုတ်ပြန်ကြေငြာချက်များနှင့် Samsung မှတင်ပြသောသတင်းများအားလုံးနှင့်အတူကျွန်ုပ်တို့ပြန်လာကြလိမ့်မည်။
ဖန်သားပြင် ၅.၈ လက်မကွေးကောက်စူပါ AMOLED ၅.၈ လက်မကွေးကောက်စူပါ AMOLED
resolution ကို 2960 1440 pixels ကိုက x 2960 1440 pixels ကိုက x
Processor ကို Exynos 8895 / Snapdragon 835 Exynos 8895 / Snapdragon 835
ရမ် 4GB 4GB
သိုလှောင်မှု 64GB + ကာ microSD 64GB + ကာ microSD
နောက်ကင်မရာ Dual-Pixel Autofocus / Optical Stabilization / Laser Autofocus / F / 12 နှင့် 1.7K ရုပ်ရှင်မှတ်တမ်းတင်နိုင်သော4MPx Dual-Pixel Autofocus / Optical Stabilization / Laser Autofocus / F / 12 နှင့် 1.7K ရုပ်ရှင်မှတ်တမ်းတင်နိုင်သော4MPx
ရှေ့ကင်မရာ 8 MPx autofocus နှင့်f/ 1.7 aperture ပါ ၀ င်သည် 8 MPx autofocus နှင့်f/ 1.7 aperture ပါ ၀ င်သည်
ဆက်သွယ်မှု 4G LTE + Wi-Fi Dual-Band ac /a/b/ g / n + Bluetooth 4.2 (apt-X နှင့် LE) + GPS + NFC + USB-C 4G LTE + Wi-Fi Dual-Band ac /a/b/ g / n + Bluetooth 4.2 (apt-X နှင့် LE) + GPS + NFC + USB-C
ဘက်ထရီ 3000 mAh ဘက်ထရီ 3500 mAh ဘက်ထရီ
အရွယ်အစားနှင့်အလေးချိန် ၁၄၈.၉ x ၆၈.၁ x ၈.၀ မီလီမီတာ / ၁၅၁ ဂရမ် -
operating system ကို အန်းဒရွိုက် 7.0 Nougat အန်းဒရွိုက် 7.0 Nougat
စြေး 799 € 899 €
Galaxy S8 နှင့် S8 + တို့၏ပုံများ
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Androidsis ပါ » Android ထုတ်ကုန်များ » မိုဘိုင်း » Samsung » တရားဝင် Galaxy S8 နှင့် S8 + တို့၏သတင်းအချက်အလက်အားလုံးပေါ်လာသည်
အံ့သြစရာကောင်းလောက်အောင်ပဲ .. ဒါပေမယ့်ကြည့်ရတာသူတို့ဟာ navigation button တွေကိုဖယ်ရှားပစ်လိမ့်မယ်။ ဒါကြောင့်သူတို့က screen ရဲ့အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်လာမှာသေချာတယ်။ ဒါက Huawei နဲ့ Xperia ကိုမုန်းတီးလိုက်တာပဲ .. အမှား - (…,
ဘယ်လို Galaxy S8 ကင်မရာကိုပိုမြန်ဖွင့်နည်း
[APK] [ထုတ်မထားသော] beta testers အတွက် "El Tiempo" ၏လျှောက်လွှာသည်အလွန်ကောင်းမွန်သည်